खानेपानी त छैन कसरी हात धुनु ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
मेरो नाम कुमारी श्रेष्ठ । हाम्रो पाँच जनाको परिवार छ । म पेप्सीकोला र जडीबुटी बिचको छाप्रोमा । म हरेक दिन यसरी नै पेप्सीकोलाको यो सडक किनारमा पानी भर्न आउँछु । ढिलो भयो भने पानी सकिन्छ भनेर म टङ्की खुल्ने समय भन्दा दुई घण्टा अगाडी नै आउँछु । दुई घण्टा अगाडी आउँदा पनि कहिलेकाहीँ त ४ घण्टा सम्म पर्खिनुपर्छ । अनि ढिलो आउँदा चैँ पालो पाउन मुस्किल हुन्छ । कोही बेला झन् पानी निकै सानो आउँछ । एउटा भाँडो भरिन पनि निकै बेर लाग्छ त्यसैले सक्दो छिटो नै आउँछु । छिटो आए छिटो हुन्छ नि त घर फर्कन पनि।
अहिले जताततै कोरोना छ, कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत दुरी बनाउनुपर्छ भन्छन् । तर, के गर्नु घरमा पानी आउँदैन, पानी भर्नैपर्यो । फेरी हाम्रो त खाने पानी यही हो । त्यसैले पनि त चाहियो नै ।
चैतमा लकडाउन भएदेखि यही पानी थाप्न आउन पनि सजिलो छैन । पानी भर्न निस्के पनि पुलिसले गाली गर्छन् । सधैँ, पुलिसको आँखा छलेर आउनुपर्छ । अहिले कमाएर अहिल्यै खानुपर्नेले हामीलाई खाना त दिन सक्दैनौ, पानी त खान देऊ भनेर झगडा गर्दै आउनुपर्छ । चार वटा भाँडा पालैपालो कोठासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । पानीका भाँडा पुर्‍याएर फर्किदा हात रित्तै हुन्छ । रित्तै देखेपछि पुलिसले गाली गर्छ । अस्ति त कति बेरसम्म पुलिसले रोकेर राख्यो ।
लकडाउन अगाडीसम्म म गलैँचा उद्योगमा काम गर्थेँ । श्रीमान् निर्माण मजदुरको काम गर्थे । अहिले त हामी दुवै जनाको काम रोकिएको छ । चामल किन्ने पैसा नभएको समयमा पानी त झन् के किनेर खान सकिन्थ्यो र !
अहिले त मलाई कोरोनाभन्दा पनि बढ्ता त घरभेटीको डर लाग्या छ । ३ हजार कोठा भाडा तिर्नुपर्छ । ३ महिना भइसक्यो भाडा तिर्न सक्या छैनौँ । घर भाडा माग्या माग्यै छन् ।
पानीको लागि लाइन र भिडभाडमा ठेलमठेल नगर्ने हो भने त पालो आउँदैन । अनि पानी खान पनि पाइँदैन। कोठामा पानी आउँदैन, खान, लुगा धुन, नुहाउन यही पानी यही प्रयोग गर्ने हो । यहाँबाट पानी लिन नपाए त हामी पानी नपाएरै मछौं । खाने पानी त नपाउने हामी जस्तालाई पटक पटक हात धोऊ भन्छन् । खानेपानी त छैन कसरी हात धुनु ? आज पनि धेरै सानो आछ । सानो पानी आउने यो धारोमा २० लिटरको एक भाँडो पानी भर्न आधा घण्टा लाग्छ । आधा दिन त पानी खोज्दै बित्छ । यहाँ पानी लिन आएको यत्रो बेर भइसक्यो । साँझको ५ बजिसक्यो, आज त यही रात पर्छ जस्तो छ ।
यसरी बाहिर निस्कँदा मान्छेसँग सम्पर्क भयो भने कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर त लागेको छ । तर के गर्नु किनेर खाऊँ भने काम छैन, पानी नखाई बाँच्न सकिँदैन । पानी त खान पाउनुपर्‍यो नि ! पैसा भए त किनेरै खान्थ्यौ नि । नभएर पो यसरी दुःख गर्नु परेको । फेरी यसरी दुःख गरेर लागेको पानी कसरी त्यो पटक पटक हात धोएर खर्च गर्नु भन्या ।
यो कथा कुमारी श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको हो ।
मिडियाले नबुझिदिंदा नरमाइलो लाग्छ
२७ असार २०७७, शनिबार १७:००